#3 Tantara any an-kafa...ao Afrika Atsimo: Mpisolo vava tsotra lasa olo-mahery, fitaratra amin’ny ady amin’ny kolikoly ao Afrika Atsimo, satria… - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 15 Jolay 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Hifarana ny volana oktobra ho avy izao ny fito taona hipetrahan-dRamatoa Thulisile « Thuli » Madonsela eo amin’ny toeran’ny Mpanelanelana ny Repoblikan’i Afrika Atsimo. Ny asany izay miompana indrindra amin’ny fametrahana tany tan-dalàna sy fitondrana mirindra ao Afrika Atsimo. Nandritra ny fepotoana naha Mpanelanelana azy dia maro ny fanenjehana sy fandrahonana nihatra taminy satria ny fanadihadiana rehetra izay sahaniny dia miompana amin’ireo fiahiahiana ny fitondràntena tsy mendrika, fanararaotam-pahefana ary koa ny haratsin’ny kalitaon’ny fitantan-draharaham-panjakana amin’ny ambaratonga rehetra, isan’izany ny eo anivon’ny fiadidina ny fitondràm-panjakana. Ny fikirizana sy ny fahombiazan-dRamatoa Madonsela dia namemelona indray ny fanantenan’ireo olom-pirenena ary hanan’izy ireo fahatokisana ny Mpanelanelan’ny repoblika.
Ny ankamaroan’ny tatitra voarain’ny Mpanelanelana dia mikasika raharahan’olon-tsotra amin’ny ankapobeny. Ny taona 2014 dia namoaka tatitra Ramatoa Madonsela izay nampiseho fa ny filoham-pirenena Jacob Zuma dia nampiasa volam-panjakana ho amin’ny tranony anankiray. Taorian’io tatitra io dia naneho ampahibemaso ny fialantsininy ny filoha ary koa voatery namerina ny ampahiny amin’io vola io.
Nanomboka teo dia miaina anaty tahotra i Thuli Madonsela. NY 1 aprily 2016 fantatra tamin’ny alalan’ireo polisim-pirenena fa mpamono olona matihanina iray avy ao atsimon’ny Tonizia voakarama 50000$ no voakarama hamono azy. Nangataka izy noho izany ny fiarovan’ny mpitandro ny filaminana izay tsy nanome lanja firy ity fandrahonana ity.
Nisy ihany koa ireo mpitsikera izay nilaza fa ny tanjon’dRamatoa Madonsela dia ny hisongadina eo amin’ny sehatry ny haino aman-jery. Misy ihany koa hoy izy ireo ny hadisoana eo amin’ny fanadihadina izay ataony. Araky ny mpitondra tenin’ny fikambanan’ny tanora kaominista (Young Communist League of South Africa), Khaya Xaba dia nihoatra ny fefy ramatoa Madonsela amin’ny fanalana baraka ny filoham-pirenena Jacob Zuma.
Manoloana izany fiampangana izany dia namaly ity mpisolo vava fa mbola tsy tsapany ny fizoran’i Afrika Atsimo ho amin’ny tany tan-dalàna. « Tsy kolotsaina tsimatimanota loatra ilay izy », hoy izy. Ary nampiany hoe « Ny irinareo dia ny hampiseho fa mitovy avokoa ny olon-drehetra, miaiky ho ambanin’ny lalàna ary koa tompon’andraikitry ny fihetsika ataony ny tsirairay avy na mifanaraka amin’ny fitondràna izy na tsia ».
Ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy mikasika ity tranga ity dia hitanao amin’ny alalan’ity rohy manaraka ity (Washington Post) : https://www.washingtonpost.com/world/africa/how-a-quiet-wonky-lawyer-became-south-africas-corruption-buster/2016/06/12/5c3be154-2dc7-11e6-b9d5-3c3063f8332c_story.html
Ary ny lahatsoratra amin’ny teny Frantsay ( BBC Afrique) : http://www.bbc.com/afrique/region/2016/05/160509_africa